Monday, 23 Nov, 2015 4:48 PM
भारतले अघोषित नाकाबन्दी गरेपछि काठमाडौं उपत्यकासहित देशभर पेट्रोलियम पदार्थको अभाव बढ्दै गएको छ जनजीवन अत्यन्तै कष्टकर बन्दै छ ।
अहिले सम्म जे जति भए, जसो तसो गर्जो टालिएकै छ । परिस्थितिको पूवार्नुमान अनुरुप यही अवस्था रहिरहे अबको पाँच दिन पश्चात् भने अभावले के कति अवस्थामा पुर्याउँछ त्यो भने हामी सर्वसाधारणले भोगन बाँकी नै छ ।
त्रासदीपूर्ण महाभुकम्पमा परि हजारौँ नेपालीले परिवार गुमाए । लाखौँको बिचल्ली भयो । खर्बौँको हानीनोक्सानी कोक्ष्ति व्यहोरेको नेपालले अहिले नाकाबन्दीको समस्या झेल्दै छ । आलो घाउमा नाकाबन्दीले नुनचुक छर्ने काम गरेकको छ ।
भुकम्प सँगै एक हुन नसकेको राजनीतिक अस्थिरतलाई माथ दिँदै दलहरु एकताबद्ध भएर संविधान ल्याए । देशले कानुन पायो लगतै भड्किलो लबजका आन्दोलनका शैलीहरु स्थापित हुन थाल्यो । के खोज्छस् कानो आँखो भनेझैँ अहिले आएर नाकाबन्दी चरम उत्कर्षमा आईपुग्यो ।
सिमा नाका अवरोधले जीवनयापन कष्टकर बन्दै गर्दा, शैक्षिक क्षेत्र पनि प्रभावित बन्यो । लाखौँ विद्यार्थीको भविष्यमा अन्धकार छायो । विश्वविद्यालयले शैक्षिक सत्र पनि एक वर्ष पर धकेल्ने अवस्था सिर्जना भयो । स्वास्थ्य क्षेत्रमा अभावले जरो गाड्न थाल्यो । औषधीय सामाग्रीको अभावले बिरामीहरु अस्पतालको शैय्यामा मृत्यु बरण गनए छटपटाईरहेका छन् । छिटफुट रुपमा सिमा नाका खुकुलो भयो, नानका खोलिएका समाचार सुन्छौँ, अब त केही होला कि भन्ने लाग्छ१ तर समाचार कुनै अखबारमा मात्र नभएर तथाकथित भ्रमको हल्लामा फिँजिएर तुम शरणम् हुन्छ ।
भने जस्तै का यावत तरिकाले तराईमा भड्केको अराजक शैलिका शान्तिपूर्ण आन्दोलनले हामी मात्र पिल्सिने११ आन्दोलनको रबैया हेर्दा लाग्छ कि यो आन्दोलन सिर्फ रवाफमा परिणत हुँदैछ । देशमा जुन किसिमको हत्कण्डा मच्चिँदै छ यसले सिंगो मातृभूमीलाई नै मर्माहत तुल्याएको छ ।
न खाना पकाउने ग्यास, न त मट्टितेल, न त यथेष्ट इन्धन नै छ । धन्न बिजुलीको भर छ र पो एक मुठी गाँस सप्काउन पाएका छौँ । समयकै कार्यालय पुगुँ भन्दा गाडी छैन, छ त गाडी१ भन्दा सवारी हुन्छ छतमा । जसो तसो ज्यान जोगाएर चढ्नै पर्यो । कार्यालय नजाउँ त हातमुख जोड्न धौ धौ।
अघोषित नाकाबन्दीबीच गुज्रिरहेको हाम्रो दैनिक जीवनयापन कतिञ्जेल रैतिका दास अनुरुप चल्ने होलारु सर्सर्ति केलाएर हेर्दा यो नाकाबन्दीका कारण सबैभन्दा ठूलो असर इन्धन आपूर्तिमा देखियो । दिन दिनैको लाईन पश्चात् पालो आउँछ अनि आफ्नो पालोमा तेल सकिन्छ । फेरी लाईन बस्नु पर्ने । बिडम्बना१ अनि संरचना यो देशको कस्तो कस्तो रु अवाक् र आजित भएर माखोको जीवन व्यतित गर्न बाध्य छौँ हामी नेपाली ।
चिन्ता पर्न थालेको छ फेरी यदा कदा चर्चा चल्दा खेरि तलबले बढ्ने आँट गर्दैन यस्तै हो भने छांक नै टर्दैन
अझ भनौँ साँझको समयमा गाडी भेट्टाउनै गाह्रो । गाडी आउँछ अनि लर्को लाग्छ बसको छतमा बस्न । झुण्डिएर यात्रा गर्यो, कोल्टे परेर गाडी कुद्छ । कहिले कुन दुलामा पस्दा के हबिगत हुन्छ, त्यो भने चढेपछि मात्रै थाहा हुन्छ । कोठा पनि नजिक भए त हुन्थ्यो नि । डाँडापारी छ, हिँडेर जाँदा ढिलो हुने । फेरी बाटामा लुटपाटको डर । जीन्दगी त्रासमै बित्छ । गन्तव्यमा पुग्न नपाउँदै पूर्णविराम लाग्छ ।
अब म मेरो तलबले के चैँ गरुरु ग्याँसको लाईनमा बस्दा ग्याँस आउँदैन, चरम अभावले तरकारीको भाउ थेगिसक्नु छैन । कोठाको भाडा तिर्नै पर्यो । खाना खाजा रोज्नै पर्यो । अलिक दिन त चाउचाउ चिउरा र दालमोठको भर छ । बजारमा महंगीले खुट्टाको नङ देखि टाउकोको तालुसम्म खुईलिने अवस्था छ ।
बल्ल बल्ल ग्यास पाउने खबर आउँछ, लाईन बसेर भ्याईँदैन। कालोबजारी थालेका चम्चेले सातो लिने मोल बताउँछ, लु भनेजति पैसा दिनुस् तपाईँले भने मुताबिकको सरसामाग्री तपाईँको घरमै डेलिभरी गर्दिन्छु । अनि पो कन्सिरी तातेर आउँछ । पूँजीवादी प्रवृतिले हामी सर्वहाराको जीवन विलिन हुने पक्कै छ ।
पेट्रोल ५०० रुपैया प्रति लिटर तिरेर पनि ट्यांकी भरेकै छौँ । हप्ता दश दिनपछि १० लिटर डिजेल भरेर एकतर्फी गाडी चढ्न पनि भ्याएका छौँ । १४०० रुपैयाँ पर्ने ग्यासलाई आठ हजार तिरेर पनि चुल्हो बालेकै छौँ । मागेर भएपनि भुँडी भर्न भ्याएकै छौँ । अभावलाई माथ दिँदै चर्को मूल्यमा जीवन धान्न सक्ने हामी महान् छौँ । अब भने थेग्ने हिम्मत बहन गर्न नसकेर होला, शरीरमा रगत प्रवाह हुन छाड्यो । आखिर कति दिन चैँ यसरी थेग्न सकिएला र ?
भ्रामक हल्लाका पछाडि जनता बकुलर जसरी पछ्याउँदैछ , सरकार के हेर्दैछर ? आम मानिसको जिज्ञासा छ ? सरकारले पनि के नै गरोस् ? भए जति गरिहाल्यो, लम्पसार परिहाल्यो । खानलाई रासन छैन । बजारमा खाने तेलको मूल्य बाँस जस्तो हर्लक हर्लक दिन प्रतिदिन बढ्दै छ । चिन्ता पर्न थालेको छ फेरी यदा कदा चर्चा चल्दा खेरि तलबले बढ्ने आँट गर्दैन यस्तै हो भने छांक नै टर्दैन ।
देशमा नयाँ सरकार बनेको छ । जननिर्वाचित सरकार बनेपछि जनताले राहतको अपेक्षा गरेका थिए । किनकी सरकार आफैंले मत दिएकाहरुबाट बनेको थियो । अहिलेको संविधानसभाले देशमा स्थायि शान्ति विकास र जनचासोको विषयमा पनि सम्बोधन गर्ने आशा थियो । यो स्वभाविक थियो । दशक लामो द्वन्द्वका कारण हिंसाको दलदलमा फसेको राजनीतिले भरखरै मुक्ति पाउँदै थियो । हिंसाको धङधङी बाकेर अरुलाई निषेध गर्न सकिन्छ भन्ने सोच राख्नेभन्दा शान्तिको बाटोबाट सबैलाई समेटेर लैजानुपर्छ भन्नेहरु नयाँ शक्तिमा आएका थिए ।
पानी, बत्ती, खाद्यान्न, यातयातका सबै साधनमा भाउ बढेकै छ । त्यो सबै लोकतन्त्रमा जनताका नाममा उपहार हुनेछन् । अनि राष्ट्रको ढुकुटी बलियो बनाउन जनताको ढाड सेक्नुपर्ने तर्क गर्नेहरु खुला र छाडा बजारतन्त्रको वकालतमा उत्रिएका छन् । राष्ट्रसंघको विभिन्न बुँदामा हस्ताक्षर हुन्छ, देश काल परिस्थितिको बारेमा मौन हुन्छ । के भयो, कसरी भयो भनेर जान्न खोज्नेहरु उपर खुट्टी, उत्तानो परेर मधेशको घाम ताप्दैछ ।
देश संघिन घडिमा छ । प्रधानमन्त्रीले सम्बोधन गर्छन् धैर्य धारण गर्नुहोला । यो त हामी सबैले बुझी आएकै छौँ । देशमा संविधान जारी भयो र सँगै मदहोस् छायो । त्यही बाट सत्ता सिनारियो सेलाउँदै गयो । सके खुट्टा तान्ने नसके खाटै भाँच्ने प्रवृत्ति हाबी भएपछि कसको जोर चल्यो र यहाँ । मेरो गोरुको बाह्रै टक्का भनेझैँ सत्तापिपासुले देशको खुन चुसी चुसी, आफ्नै भलो गरे । आफु भलो त जगद् भलो । सियो बनेर पस्नेहरु फाली बनेर निस्किएपछि स्वाहा स्वाहा भन्दै होम हाल्छन् अनि प्रायश्चित गोदान गरेर पापको भारी विसाउँछन् ।
देशको अर्थतन्त्र झण्डै चार दशक पछि माईनसमा गएको छ । भन्सार प्रभावित छ । दैनिक अर्बौँको घाटा व्यहोर्दै छ मुलुक । सरकारले यस वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको थियो तर नाकाबन्दीका कारण नेपालमा आठ लाख ४६ हजार १४ गरिब थपिनेछन्, जुन कुल जनसंख्याको ३ प्रतिशत रहेका छन् । भारतको अघोषित नाकाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको असरको राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७२/ ७३ को आर्थिक वृद्धिदर १/१ प्रतिशतले ऋणात्मक हुने देखाएको छ । अब अर्थतन्त्रको समस्या कसरी उकास्नेरु गरिबीलाई पिल्साउने की गरिबी निवारण गर्ने रु नाकाबन्दीको जडलाई जरै बाट जमर्को का साथै वैकल्पिक व्यवस्था तर्फए अग्रसर हुने कि ?
अब भने यो विकराल समस्याको न्यायोचित आंकलन गर्नु जरुरी छ की ?